Wasiiro ka tirsan Hirshabeelle oo is casilay iyo Mooshin deg deg oo ay ka gudbiyeen Madaxweynaha Hirshabelle – idalenews.com
Idalenews:-hSir jaraa’id oo Wasiirada goor dhow ku qabteen Hotel ku yaalla magaalada Jowhar ayaa sheegay inay isku casileen waxqabad la’aan Madaxweynaha Hirshabeelle iyo inuu ka gaabiyay howlihii loo igmaday.
Wararka ayaa sheegaya in Wasiirada ay isugu jiraan Afar Wasiir, hal Wasiiru dowle iyo 7 Wasiir kuxigeen.
Qaar ka mid ah Wasiirada is casilay ayaa ka mid ah xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle, ayaa ku biiray ololaha ka dhanka ah Madaxweynaha Hirshabeelle oo saaka laga diyaariyay Mooshin xil ka qaadis ah.
Wasiirada iscasilay ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta,kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyo qaar kale.
Iscasilaada kadib ayaa qaar kamid ah xildhibaanada Hirshabelle waxa ay mooshin ka geeyeen Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble. Mooshnkan ayaa waxaa saxiixay 42 xildhibaan kuwaasoo ay ka mid yihiin wasiirada iyo wasiir ku xigeenada is casilay.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise ayaa ka guddoontay mooshinkan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle.
Qoddobada lagu eedeeyay Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa kamid ah Jebin qodobo dastuuri ah,Ku takrifal awoodeed,Xilgudasho la’aan,iskahorimaad beelaha dega Hirshabelle,Shaqo xumo xukuumada ah iyo la tashi la’aan labada gole.